aajavoli~ सभापति क्याम्पबाट देउवा की निधी ? ~ सभापति क्याम्पबाट देउवा की निधी ?
सभापति क्याम्पबाट देउवा की निधी ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मिति नजिकीएसँगै भावी सभापतिको चर्चा चुलिएको छ । १३ औं महाधिवेशनका उपविजेता राचन्द्र पौडेल, वर्तमान महामन्त्री शशांक कोइरालादेखि शेखर कोइरालासम्मले आफ्नो उम्मेद्वारीमा दाबी गरिहेका छन् । पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा आफै फेरि उम्मेदवार बन्ने जनाइरहेका छन् । पार्टी तेस्रो समूह कृष्ण सिटौलाले पनि सभापतिमा उम्मेद्वारी दिने संकेत गरिरहेका छन् । पचास कटेका युवाहरु पनि धमाधम आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
अझ गजबको कुरा त के छ भने वर्तमान सभापति शेर बहादुर देउवा नजिक मानिएका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले पनि आफू भावी सभापतिको उम्मेद्वार भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । उनको उम्मेद्वारीले पार्टी सभापतिको क्याम्पबाट सभापतिको उम्मेद्वार को भन्ने जिज्ञासा उठाएको छ ।
निधीको उम्मेद्वारसँगै देउवा क्याम्पका खैलाबैला मच्चिएको छ । के साच्चै विमलेन्द्र निधी आउँदो महाधिवेशनको पार्टीको सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने छन त ? यो प्रश्न चारैतिर उठी रहेको छ । बुढानिलकण्ठ श्रोतले जनाए अनुसार निधीले १४ औं महाधिबेशनमा वर्तमान सभापति शेर बहादुर देउवालाई सघाउने सहमती भएको दाबी गरेको छ ।
श्रोतले भन्यो, अहिले उहाँले सभापतिमा दाबी गरेपनि महाधिवेशनसम्ममा सबै मल्छि । उहाँले सभापति देउवालाई सहयोग गर्नुहुन्छ, श्रोतले बतायो । तर पछिल्लो समयमा निधी संचार माध्यममा आफू उम्मेदवार बन्ने र कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने बताइरहेका छन् । उनले वर्तमान सभापति देउवाले आफूलाई सभापतिमा सर्मथन गर्ने दाबी समेत गर्दै आइरहेका छन् ।
निधी नजिक श्रोत भन्यो, १३ औं महाधिवेशनमा नै पार्टी सभापति देउवाले १४ औं महाधिवेशनमा निधीलाई सभापति दिने सहमती भएको जनाएको छ । सभापतिले इमान्दारसाथ निधीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । श्रोतले दाबी जे गरे पनि, यसको कुनै प्रमाण भने कतै छैन ।
यदी विमलेन्द्र निधी उम्मेदवार बनेमा, अहिलेको पार्टी भित्रको आन्तरिक समिकरण परिवर्तन हुने देखिन्छ । समिकरण नयाँ हुन्छ । सभापति देउवा एक कार्यकाल आफू नै सभापति बन्ने पक्कापक्की हुने गरी नयाँ समिकरण बन्नेछ । देउवाले गृहकार्यका लागि आफू निकट नेताहरु परिचालन गरिसकेको एक श्रोतले आजभोलिलाई जानकारी दियो ।
निधी भने आफ्नो उम्मेद्वारी दाबी घोषणा गरे पनि टिम भने देखिदैन । उनीहरु अहिलेसम्म एक्लै छन् । उनी पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पोडेलको टिम ब्रेक गर्ने दाउमा रहेको देखिन्छ । जुन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
९ कार्तिक २०७७, आईतवार प्रकाशित
विश्वमा एकैदिन ६ लाखबढी कोरोना संक्रमित थपिए, १२ हजारको मृत्यु
७.	अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
८.	अभिभावकद्वारा गाउँपालिका र विद्यालयमा तालाबन्दी